FIFIDIANANA BEN’NY TANANA : Nomen’ny Ceni fampahafantarana manokana ireo kandidà
Ny alakamisy 29 Aogositra lasa teo no nisokatra tamin’ny fomba ofisialy ny fanaterana ny antontan-taratasy filatsaha-kofidiana ho an’ireo olom-pirenena maniry hilatsa-kofidiana ben’ny tanàna. 2 septembre 2019
Ny 12 septambra izao no hikatona izany. Mbola manana andro maromaro araka izany ireo kandidà hamenoana sy hikarakarana ny dosieny. Mifandraika amin’izay indrindra dia nisy ny atrikasa nataon’ny Vaomieram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana (Ceni) ho an’ireo rehetra manana eritreritra hilatsaka ho kandidà ben’ny tanàna sy mpanolotsain’ny Kaominina. Atrikasa niompana indrindra amin’ny fampahafantarana amin’ny antsipiriany mahakasika ireo antontan-taratasy rehetra ilaina amin’ny firotsahan-kofidiana ary nanazavana ny lalàna mifehy ny fifidianana ihany koa.
Ny faran’ny herinandro lasa teo no nanatanterahan’ny Ceni izany tamin’ny alalan’ireo rantsamangaikany eny anivon’ny Distrika. “Nantsoina ireo rehetra maniry ho kandidà ben’ny tanàna mba nanazavana ny lalàna mifehy ny fifidianana. Ankoatra izay dia nisy ny fanazavana mahakasika ny famenoana ny dosie. Maro mantsy ireo kandidà mbola mikaviavia amin’ny fotoana hamenoana ny dosie”, hoy ny fanazavana avy amin’ny tompon’andraikitry ny Ceni eny ifotony. Anisany hevi-dehibe nasongadina nandritra ity atrikasa ny fanomezana hafatra an’ireo kandidà mba hizoran’ny fifidianana ao anatin’ny filaminana. Nambara tamin’izy ireo fa rehefa tonga ny fifidianana dia mpifaninana ny kandidà rehetra fa tsy mpifahavalo akory. Tahaka ireo fifidianana roa nifandimby teo aloha dia misy hatrany ny lalàna tsy maintsy apetraka eo amin’ireo samy kandidà. Isan’izany ny tsy fahazoan’ny kandidà iray manaratsy ny mpifaninana aminy.
Nihoa-pefy ny mpitari-posy, nirefotra ny lakrimôzena polisy iray naratra voatora-bato FANDAVANA FIHIBOHANA (176) 27 mars 2020 Lehilahy 23 taona hita faty tao an-tranony ny sabotsy antoandro lasa teo ARANTA (120) 31 mars 2020 Nankatoavin’ny Fanjakana malagasy sy ny Oms FIKAROHANA HIADIANA AMIN’NY CORONAVIRUS NATAON’NY IMRA (114) 27 mars 2020 Tranga 6 nanokafana fanadihadihana, olona iray naiditra am-ponja FANAPARITAHANA VAOVAO TSY MARINA (110) 27 mars 2020 Fiara iray nifaoka mpandeha an-tongotra, miisa 02 ireo maty tsy tra-drano TSARASAOTRA (87) 27 mars 2020 Lavon’ny balan’ny Polisy ny jiolahy iray, karohina ny namany FIKASANA FANAFIHANA “VILLA” (77) 31 mars 2020